MY – Orchid Queen INFO
ဦးမြဲ (၁၈၄၃ - ၁၉၀၅) သည် ကုန်းဘောင်ခေတ်တွင် မင်းတုန်းမင်းနှင့် သီပေါမင်းတို့ လက်ထက်၌ အမှုထမ်းကာ ကနောင်မင်းသား၏ မြန်မာ့စက်မှုတော်လှန်ရေးခေတ်ဦးတွင် ရှေ့ဆောင်ပါဝင်ခဲ့သူ ဖြစ်သည်။ဒီပဲယင်းဝန်ထောက် ဦးမြဲ . . . ဦးမြဲ . . . ဦ:မြဲကို ၁၈၄၃ ခုနှစ်တွင်...
Saturn V သည် ၁၉၆၇ ခုနှစ်မှ ၁၉၇၃ ခုနှစ်အတွင်း NASA မှအသုံးပြုခဲ့သော အမေရိကန်လူသားအဆင့်သတ်မှတ်ချက် super heavy-lift လွှတ်တင်ယာဉ်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အဆင့်သုံးဆင့်ပါဝင်သည်။ Apollo ပရိုဂရမ်ကို လပေါ်လူသားများစူးစမ်းလေ့လာရေးအတွက် ပံ့ပိုးရန်တီထွင်ခဲ့ပြီး နောက်ပိုင်းတွင် ပထမဆုံးအမေရိကန်အာကာသစခန်းဖြစ်သော Skylab ကိုလွှတ်တင်ရန်အသုံးပြုခဲ့သည်။ Saturn V ကို...
. . . ဘ​အေး၊ ဦး(ပြည်​ထောင်​စု ရွှေ​တံဆိပ်​ဆု​ရှင်) . . . ဦးဘအေးကို အဖ ဦးဘိုးမျှင်၊ အမိ ဒေါ်သစ်တို့မှ ၁၉၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ဧပြီလ (၂၃)ရက်နေ့တွင် ရန်ကုန်မြို့၌ မွေးဖွားသည်။ ရန်ကုန်မြို့ရှိ စိန်ဖီးလစ် အင်္ဂလိပ် အလယ်တန်းကျောင်း [ယခု...
မြန်မာနိုင်ငံရှိ ဝန်ကြီးဌာနများတွင် နိုင်ငံခြားရေးရာကိစ္စရပ်များနှင့်ပတ်သက်၍ အဓိကဆောင်ရွက်နိုင်ရန် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနကို ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ထားသည်။ လက်ရှိဝန်ကြီးမှာ အာဏာသိမ်း စစ်အစိုးရမှ ခန့်အပ်ထားသော ဦးဝဏ္ဏမောင်လွင်ဖြစ်သည်။ အနိုင်ရ လွှတ်​တော်ကိုယ်စားလှယ်များဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသည့် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုယ်စားပြုကော်မတီ (CRPH) ကမူ ဒေါ်ဇင်မာအောင်အား ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး တာဝန်များကို ထမ်းဆောင်ရန် ပြည်​ထောင်စုဝန်ကြီးအဖြစ် ခန့်အပ်ထားသည်။Ministry of Foreign...
ဇီးကွက်စိန်သည် တစ်ချိန်က မြန်မာနိုင်ငံ၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ပုဂံမြို့ရှိ ထူးထူးခြားခြား အရပ်အရှည်ဆုံး ပုဂံမြို့သူ ဖြစ်သည်။ . . . ဇီးကွက်စိန် . . . ဇီးကွက်စိန်ကို ၁၃၁၈−ခုနှစ်၊ (၁၉၅၆)ခုနှစ်တွင် အဖ ဦးထွန်းသိန်း၊ ​ဒေါ်ငြိမ်းတို့မှ မွေးဖွားသည်။ မွေးချင်း လေးယောက်အနက်...
ရွှေအင်းတောင်စေတီတော် သည် တောင်တွင်းကြီးမြို့၏ အလယ်တွင် တည်ရှိသည်။ရွှေအင်းတောင်စေတီ . . . ရွှေအင်းတောင်စေတီတော် . . . တောင်တွင်းကြီးမြို့ကို တည်ထောင်သည့် သဂရမင်း ငါးဆက်မြောက် ပိတ်ရောင်မင်းလက်ထက်တွင် ဖြစ်၏။ မြတ်စွာဘုရား ပွင့်တော်မမူမီ နှစ် ၃၀၀ ခန့်တွင် မဇ္ဈိမဒေသ၊ သင်္ကဿနဂိုရ်ပြည်တွင်...
စီမံကိန်းစိစစ်ရေးနှင့် တိုးတက်မှုအစီရင်ခံရေး ဦးစီးဌာနကို အမျိုးသားစီမံကိန်းနှင့် စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ဝန်ကြီးဌာန၏ အုပ်ချုပ်မှုအောက်၌ ၁၉၇၂ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ(၁)ရက်နေ့တွင် စတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။ . . . စီမံကိန်းစိစစ်ရေးနှင့် တိုးတက်မှုအစီရင်ခံရေး ဦးစီးဌာန . . . စီမံကိန်းစိစစ်ရေးနှင့် တိုးတက်မှုအစီရင်ခံရေး ဦးစီးဌာန၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များမှာ-လုပ်ငန်းစီမံကိန်းသစ်များ၊ တိုးချဲ့လုပ်ငန်းစီမံကိန်းများ အဆိုပြုတင်ပြသည့်အဆင့်မှ...
ထန်းတောကြီးရွာ (အင်္ဂလိပ်: Htan Taw Gyi Village)သည် နေပြည်တော် ပြည်ထောင်စုနယ်မြေ၊ တပ်ကုန်းမြို့နယ်၊ ထန်းတောကြီးကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ ထန်းတောကြီးကျေးရွာအုပ်စုတွင် အိမ်ထောင်စုအရေအတွက် ၁၃၄၆ စု၊ လူဦးရေ ကျား ၂၄၇၇ ဦး၊ မ ၂၉၁၄ ဦး၊ လူဦးရေ...
[၁၉၆၄ ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံ တော်လှန်ရေးကောင်စီ ဥပဒေအမှတ် ၄။]ဤ ဆောင်းပါးသည် မည်သည့် ကျမ်းညွှန်း (သို့) အကိုးအကား ကိုမှ ရည်ညွှန်းထားခြင်းမရှိပေ။ (၁၈ ဩဂုတ် ၂၀၂၀)ဤဆောင်းပါးကို ဝီကီစံနှင့် ကိုက်ညီစေရန် ပြင်ဆင်တည်းဖြတ်ရန် လိုအပ်နေသည်။ အကယ်၍သင်ပြင်ဆင်နိုင်ပါက ဤဆောင်းပါးအား တိုးတက်စေရန် ကျေးဇူးပြု၍ ပြင်ဆင်ပေးပါ။...
၁၉၉၇ ခုနှစ် အရှေ့တောင်အာရှ အားကစားပြိုင်ပွဲ(အင်ဒိုနီးရှား: Pesta Olahraga Asia Tenggara 1997) ၊ (အင်ဒိုနီးရှား: Pesta Olahraga Asia Tenggara ke-19) သည် အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ၊ ဂျကာတာမြို့၌ ၁၉၉၇ခုနှစ် အောက်တိုဘာ ၁၁ရက်မှ ၁၉ရက်အထိကျင်းပသော ၁၉ကြိမ်မြောက် အရှေ့တောင်အာရှ...